သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်လူမှုမီဒီယာတွင်ရှိသင့်သည်။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 15, 2009 တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 8, 2012 ခရစ်လူးကပ်စ
မကြာခဏဆိုသလိုငါကလူတွေကလူမှုရေးမီဒီယာတွေမှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့“ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း” မလုပ်ချင်ပုံ၊ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အဲဒီမှာမရှိသင့်သူ၊ လူများဖြစ်သင့်စသည်စသည်ဖြင့်ပို့စ်များကိုကျွန်တော်မကြာခဏတွေ့ရတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်က blogger နှင့်စီးပွားရေးသမား Mike Mike Seidle ၏ရေးသားချက်ဖြစ်သည်။ ငါသူ Mike ကိုမသိ, ငါသူ့ကိုဆန့်ကျင်ဘာမှမရှိဘူးကြောင်းနိဒါန်းချင်တယ်။ ငါသူ့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ တွစ်တာ ငါသူယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားရေး blogging နှင့်လူမှုမီဒီယာနှင့်ပတ်သက်။ ကောင်းသောအကြံအစည်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်, သို့သော်ငါနေဆဲဤအချက်အပေါ်သူ Mike နှင့်အတူသဘောမတူ။
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည် Twitter ပေါ်တွင် - Facebook တွင်ရှိရန် - ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုဖြစ်တယ်, အကြောင်းပြချက်၏စုံတွဲတစ်တွဲသည်။
၎င်းသည်သင့်အားအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်လူမှုမီဒီယာတွင်၎င်းတို့၏အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆက်ဆံရေးနှင့်မိတ်ဖက်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်သည်။
သူကလူများသည်အခြားလူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံလိုကြသည်ဟုထောက်ပြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကမှန်ပေမယ့်သင့်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်နေရာလွတ်ထုတ်မပေးနိုင်ဘူးလို့လည်းမဆိုလိုပါဘူး။ ဤတွင်လုပ်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည် -
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုယ်စားဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အားမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ မွမ်းမံသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါ - သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူသိများအောင်အထောက်အကူပြုသည့်အစစ်အမှန်မျက်နှာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။ FreshBooks သည်၎င်းကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်သည် သူတို့ရဲ့တွစ်တာစာမျက်နှာ။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားလူမှုရေးမီဒီယာများပေါ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုယ်စားဆက်သွယ်ခွင့်ပြုရန် - ကျွန်ုပ်စီမံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ twitter အကောင့် အဖြစ်ကောင်းစွာသောကြောင့် Facebook ကစာမျက်နှာ ဒါပေမယ့်ငါ့မှာကိုယ်ပိုင်အကောင့်လည်းရှိတယ်။ အတော်များများမင် ဖောက်သည်တွေကငါ့နောက်ကိုမလိုက်ချင်ကြဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းပြီ၊ တစ်ခါတစ်လေအားကစားအကြောင်း၊ ငါ့ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုငါပြောချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါပြောရမယ့်တာကသူတို့အတွက်သိပ်မကောင်းဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်လည်းထောက်ခံအားပေးသူနှင့်evဝံဂေလိတရားဟောပြောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည် အွန်လိုင်းပုံစံဆောက်မင် ပြီးတော့အဓိပ္ပါယ်ရှိရင်ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွေမှာလုပ်နေတာတွေအကြောင်းပြောတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာများကိုကျွန်ုပ်နောက်လိုက်သူများအားထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်မင် ။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ၀ န်ထမ်းများအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးပါ။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပါစေ။ သင်လူမှုရေးမီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သွားလျှင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအနည်းငယ်ပြသပါ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လူသားမဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လူမှုရေးမီဒီယာများပေါ်တွင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကို ပို၍ များပြားသော“ ဘဝ” များကသင့်အားအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းမှရရှိလာမည့်တန်ဖိုးကို ပို၍ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သဘောတူလား သဘောမတူလား သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အားလူမှုမီဒီယာများတွင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ဟူသောအခြားအကြံဥာဏ်များရှိပါကမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။
Tags: အမှတ်တံဆိပ်Facebook ကလူမှုမီဒီယာတွစ်တာ
15:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 51
ဂရိတ် post! နောက်တစ်ခုပြောရရင်လူတွေကသူတို့နဲ့မဆက်ဆံချင်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့နောက်လိုက်၊ ပရိသတ်တွေမဖြစ်ချင်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့နောက်ကိုလိုက်နေရင်ဒါမှမဟုတ်ပန်ကာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တာပေါ့။ YATS အတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ သူတို့တွင်ပရိသတ်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပြီးဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
15:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 00
ကောင်းမွန်သောမှတ်ချက် Adam - Yats သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်
16:2009 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 40
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးပြု၍ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါသည် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ။ ငါလှည့်စားတာကတခြားထုံးတမ်းစဉ်လာမီဒီယာအမျိုးအစားများထက်အခြားနည်းနဲ့သုံးရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - တွစ်တာသည်ဖောက်သည်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းတစ်ခုမေးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုဟေး၊
16:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 03
ဤနည်းကိုကြည့်ပါ။ Social နှင့်သင်လုပ်သောအရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ဖြစ်သည်။ သင်ဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားလျှင်ငါစေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးအချိန်မှာတကယ့်လူတစ် ဦး ပေးလိမ့်မယ်!
သို့သော်၊ သင်လုပ်သည့်အရာ၏အခြားအပိုင်းမှာဆွဲဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ဖိတ်ရန်ဖြစ်သည်။ လူတွေကိုသတိပြုစေချင်တယ်။ ဤအရာတွေအများကြီးတော်တော်ယေဘုယျဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ရရှိနိုင်သည့်အကြောင်းအရာအသစ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတွစ်တာရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်ပဲ့တင်ထပ်နေသောအခြားသူများ၏သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောတွစ်တာများကိုပြုလုပ်သည်။ အဲဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေကတကယ့်လူတစ်ယောက်မလိုအပ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသိသာထင်ရှားအောင်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိသေးတယ်၊ အကယ်၍ အမှန်တကယ်လူတစ်ယောက်ထိုသို့ပြုလျှင်၎င်းသည်သူတို့၏စစ်မှန်မှုကိုပျက်စီးစေသည်။ အကယ်၍ အမှတ်တံဆိပ်ကထိုသို့ပြုပါက၎င်းသည်အပြုအမူဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Social Marketing အတွက်မဟာဗျူဟာတွေအကြောင်း blog post ကိုမကြာသေးခင်ကငါရေးခဲ့ဖူးတယ်။